Ilhan Cumar oo ah xubin ka tirsan koongareeska mareykanka oo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo madaxweynaha xilka kasii dagaya ee Donald Trump ayaa ka hadashay waxa sababay rabshadaha ka socda xarunta Capitol Hill.
Xildhibaan Ilhaan ayaa ku eedeysay Hogaamiye Trump inuu khatar ku yahay dadka iyo Mareykanka, waxayna soo jeedisay in la soo xiro toddobada maalmood ee ka hartay waqtigiisa oo ku beegan 20-ka Janaayo 2021.
“Waxaa jira eedeymo badan oo loo haysto, dhammaantoodna waxay ku saleysan yihiin xaqiiqda ah in Madaxweynuhu uu la shaqeeyay oo uu ku dhiirrigeliyey dowladda in ay weerarto, in dad badan la laayo, in saacado lagala wareego Capitol-ka Mareykanka. Waxaan aaminsanahay in madaxweynuhu yahay khatar ku ah dadka iyo dowladda. “ ayay tiri Ilhaan Cumar.
Sawir laga qaaday kooxdii ka soo booday gidaarka Capitol
Waxay ku eedeysay madaxweyne Trump inuu sameeyay “hadalo lama filaan ah” isagoo ku qoray “waan ku jeclahay” Twitterka kuwa ka dambeeyay weerarkii Capitol, sida ay sheegeen xildhibaanada.
Beesha Caalamku waxay raadineysaa xal si loo qabto doorashooyin 127…
Trump waxaa saaran culeys siyaasadeed oo sababi kara in shaqada laga ceyriyo Arbacada, kadib markii xildhibaanada ay ka caroodeen talaabada uu qaaday golahooda wakiilada.
Waaxda Caddaaladda ee Mareykanka iyo FBI-da magaceeda loo soo gaabiyo magaceeda loo soo gaabiyo FBI ayaa bilaabay baaritaan ay ku raadinayaan wadajirka waxayna dacwad ku soo oogeen in ka badan 160 qof oo lagu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen weerarkaas usbuuc ka hor.
Waxaa macquul ah in kiiskan ay ku lug yeelan karaan shaqsiyaad ku dhow ama ku dhow dhow shaqaalaha madaxweyne Trump, inkasta oo aan warkan la xaqiijin karin laakiin ay qoreen warbaahinta iyo shaqsiyaadka.
Trump ayaa horey u sheegay inuu qaadi doono talaabooyin uu ku curyaaminayo madaxweynaha 46-aad ee soo socda Joe Biden, taasoo keentay in xaalad deg deg ah lagu soo rogo Washington ka dib markii sirdoonka Mareykanka ay heleen xog ku saabsan in rabshado ay dhici karaan. inta lagu guda jiro hawsha wareejinta.
Xigasho BBC Somali / Axadle.
Lumumba: how the West made one